Falanqaynta maqaarka, Falanqeeyaha jirka, Sawirka Maqaarka wajiga - Meicet
Ku soo dhowow maqaarka Mayga Shanghai
Shanghai May Maqaarka Macluumaadka Teknolojiyada Co., Ltd. waa adeeg bixiye tikniyoolajiyad qurux badan oo caqli badan oo u heellan quruxda R&D iyo Barmaamijka Waxqabadka Internetka. Calaamadeeda "MEICET" waxay diirada saareysaa qaabeynta iyo wadaagida macluumaadka quruxda caafimaadka iyo falanqaynta maqaarka dhijitaalka ah, iyadoo siineysa adeegyo caqli badan oo caqli badan iyo xalalka sirdoonka macmalka ah. Ka dib 12 sano oo shaqo adag ah, shirkaddu waxay u hoggaansan tahay fikradda wax soo saar ee "qalbi qumman, feker sax ah" si loo hubiyo tayada ugu sarraysa ee mid kasta oo ka mid ah isku xidhka wax soo saarkeeda iyo qaybteeda, iyada oo la isku dayayo in kor loo qaado khibradda caqliga isticmaalaha.
ISEMECO Sawirka Sawirka Sawirka Sawirka ...
Smart AI Falanqaynta Maqaarka Dijitaalka ah Wajiga ...
Ipad wajiga falanqeeye sixir mirro ...
Falanqaynta Sawirka Maqaarka buuxa ee Meicet ...
Iskutallaab Kala Gudbinta Laydhka UV Fudud Sk ...
Digital Qoyaanka Monitor Pen Qalinka ...
Falanqeeyaha Maqaarka Xirfadlaha Golden Col ...
Maxaad u dooraneysaa MEICET?
Dammaanadda qiimaha ugu fiican
Waxaan leenahay warshad wax soo saar noo gaar ah, waxay kuu balan qaadi kartaa inaan ku siino adeegga ugu qiimaha badan ee wax ku ool ah.
Warshad caalami ah
100% kormeerka QC kahor dhalmada
Koox heer sare ah
Shirkad tiknoolajiyad ahaan, waxaan si madax-bannaan u abuurnay hanti tiknoolajiyadeed oo horseed ah waxaanan helnay shatiyadaha tiknoolajiyadda ...
MEICET tan iyo sanadkii 2008 waxay bilawday nidaamkii ugu horreeyay ee falanqaynta maqaarka RSM-7. Kadib 12 + sano oo shaqo adag ah, is dhexgalka saxda ah ee alaabada ...
Kooxda injineerada MEICET
MEICET waxay leedahay patent algorithm u gaar ah ---- Maqaarka Cloud Algorithm. Al Is-barasho, horumarin jaban, 9 ilbiriqsiyo baaris khabiir. Kuwani waxay ka dhigayaan inay soo saaraan inta badan ...
Waxaan xooga saareynaa naqshadeynta guud ee isdhexgalka aadanaha-kumbuyuutarka, caqliga howlgalka, iyo isdhexgalka quruxda badan, si looga wada shaqeeyo xalal cusub ...
Kooxdayadu waxay la jaanqaadaan isbeddelada firfircoon ee suuqa waxayna ka jawaabaan horumarka cusub ee barnaamijka ...
Naqshadayaasha Muuqaalka Badeecadda